I-FSX i-addon ingcamango
umbuzo I-FSX i-addon ingcamango
1 unyaka we1 iveki edlulileyo #920 by NitroUK
Ndandicinga ukuba ubani owaziyo nge addon oya kundipha i-torch effect kwi-pointer yam mouse ukuze xa ubusuku balo bushushu kunye nezindiza zam ziCold nobumnyama ndibone ukutshintsha ndifuna ukuvula ukuze kuqalwe i-moya / ukukhanya ...
Ngaba kukho into enjengaleyo ngoku? ingaba yenziwe ngumntu? id uhlawule ngokuzonwabisa i-addon.
Iinqwenela ngakumbi Glenn - G-VODC
"I-Blue Skies ... Ukhuseleko olukhuselekileyo"
I-1 unyaka we-5 iintsuku ezidlulileyo - I-1 unyaka we-5 iintsuku ezidlulileyo #930 by DRCW
Hayi, andiyikucetyiswa oku ngenxa yokuba ihleli, i-pointer ye mouse izakukhangela kwi-FPS, idibanise loo nto ingenza umonakalo omkhulu ngale ndlela. Ukubheja ngokugqithiseleyo kukusebenzisa izibane zeplanethi ngexesha le-flight prep. Qinisekisa ukuba usebenze ngu-APU (i-Aux Power Unit) kwiimoto ezixhotyiswe kakuhle.
Ixesha ukwenza page: 0.219 imizuzwana